Obama oo ka qeybgalaya shir madaxeedka dalalka ASIAN oo Indonesia ka dhacaya – SBC
Obama oo ka qeybgalaya shir madaxeedka dalalka ASIAN oo Indonesia ka dhacaya
Jakarta:-Dowladda Indonesia ayaa martigelinaysa shirmadaxeedka isku xirka koonfurta bari Asia ee loo yaqaan ASIAN kaasi oo ka maanta ka furmaya jasiiradda baali islamarkaana socon doona ilamaa 23 bishan July.
Wargeyska lagu magcaabo Kompas ee ka soo baxa dalka Indonesia ayaa sheegay in madaxweynaha mareykanka Brack Obama uu ka soo qeyb geli doono kulanka 18 aad ee ASIAN.
Booqashada Obama ee Indonesia ayaa la ‘aaminsan yahay in ay noqon doonto tii labaad kadib booqashadiisii ugu horeysay bishii November ee la soo dhaafay uu ku tagay dalkaas, taasi oo qaadatay 24 saac, halkaasi oo uu khudbad uga jeediyey ummadda Islaamka Jaamacadda Indonesia ee magaalada Dibook.
Sidoo kale shirkana ayaa waxaa la filayaa in uu ka soo qeyb galo madaxweynaha dalka China Huu Jiin Taaw.
Dowladaha ku bahoobay ayaa yeelan doono kulankoodii ugu horeeyey kadib ku biiritaankii Russia iyo mareykanka, kuwaasi oo bahwadaag la ah dalalka koonfurta beri Asia.
Shirkaan ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka soo qeyb galaan bahwadaagta Istiraatiijiga u ah ASIAN oo ay kamid yihiin Australia, Canada, China, Midowga Yurub, India, Japan, Newzealand iyo kuuriyada koonfureed.
Dalalka ASIAN ayaa ku bahoobay dalalka Malaysia, Filipin, Indonesia, Brunei, Thailand, Singapore, Burma, Cambodia iyo Vietnam.